यस्ता छन् दशैंका लागि विभिन्न कम्पनीले ल्याउन लागेका गाडी :: Setopati
यस्ता छन् दशैंका लागि विभिन्न कम्पनीले ल्याउन लागेका गाडी
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, भदाै ३०
सामान्यतया सवारी साधनका पारखीहरुले दशैंको समयमा गाडी खरीद गर्छन्। नाडा अटो शोदेखि नै सबैजसो कम्पनीले विभिन्न स्किमहरु ल्याउने भएकोले यो समय गाडी खरिद गर्ने राम्रो समय पनि हो।
सवारी साधन आयातकर्ता कम्पनीहरुले ग्राहकलाई आकर्षित गर्न यही समयमा विभिन्न नयाँ मोडल पनि सार्वजनिक गर्छन्। विश्वब्यापी महामारीको कारणले यो वर्ष नाडा अटो शो हुन नसके पनि धरै आयातकर्ता कम्पनीहरु नयाँ मोडलका गाडी ल्याउने तयारीमा छन् भने कतीपयले ल्याइसकेका छन्।
टाटाको नेपालको लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङले यही हप्ता प्रिमियम ह्याचब्याक एल्ट्रोज सार्वजनिक गर्दै छ। यो गाडीलाई ग्लोबल एनक्यापले सेफ्टीमा फाइभ स्टार रेटिङ गरेको थियो। कम्पनीले पेट्रोल इन्जिनका ४ वटा अप्सन गाडी ल्याउने तयारी गरेको छ।
४ वटा सिलिन्डर जडित ११९९ सिसी पेट्रोल इन्जिनको एल्ट्रोज ६ हजार आरपिएममा ८६ पिएस पावर र ३ हजार ३ सय आरपिएममा १ सय १३ एनएक टर्क जेनेरेट गर्छ। यसमा पावर स्टेरिङ, एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम, एयरब्याग, अटोम्याटिक क्लाइमेट कन्ट्रोल, अलोए ह्विल, प्रन्ट पावर विन्डो लगायतमा फिचर्स समावेश छन्।
नेपालको लागि हुण्डाइ मोर्टसको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालीले दर्शैका लागि सेडान गाडी औरा ल्याइसकेको छ भने ग्राण्ड आई टेन नियोस र नेक्स्ट जेनेरेसन क्रेटा ल्याउने तयारीमा छ। १.२ लिटरको कप्पा डुअल भिटिभिटी पेट्रोल इन्जिनको औराले ६ हजार आरपिएममा ८१.८६ बिएचपी पावर र ४ हजार आरपिएममा ११३.७ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ।
यसमा फ्रन्ट डुअल एयरब्याग, एन्टीलक ब्रकिङ सिस्टम, एबिएस विथ इबिडी, रेयर पार्किङ सेन्सर, इमर्जेन्सी स्टप सिग्नल लगायतका सुविधाहरु रहेका छन्।
कम्पनीले यसको सुरुवाती मूल्य ३३ लाख ९६ हजार निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै ग्राण्ड आई टेन नियोस र नेक्स्ट जेनेरेसन क्रेटा १५ दिनभित्र सार्वजनिक गरिने कम्पनीका महाप्रवन्धक रुपेश शर्मा भट्ले जानकारी दिए।
कुन कुन अप्सनको ल्याउनेबारे गाडी सार्वजनिक गरेकै समयमा भनिने उनले बताए।
डिएसएफके नेपालको आधिकारिक वितरक कुजु नेपालले पनि दशैं तिहारलाई मध्यनजर गर्दै ग्लोरी ५६० नेपाल भित्राएको छ।
यूरो ५ मापदण्डको इन्जिन दिइएको ग्लोरी ५६० को १.५ लिटरको टर्बो पेट्रोल इन्जिनले अधिकतम ५ हजार ७ सय आरपीएममा १ सय ४८ बिएच पावर र १ हजार ८ सयदेखि ४ हजार आरपीएममा २३० एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ। त्यस्तै यसको इन्धन ट्याङ्कको क्षमता ५० लिटर रहेको छ। यसको चारै चक्कामा डिस्क ब्रेक दिइएको छ।
त्यस्तै, १७ इन्चको अलोय ह्वील, एयरव्याग, सिट बेल्ट रिमाइन्डर, एबिएस, इबिडी, इन्जिन इमोविलाइजर, आलर्म सिस्टम, स्पिड सेन्सिङ अटो लक, क्र्यास अटो अनलक जस्ता फिचर पाउन सकिन्छ। यसमा सफ्ट टच ड्यास बोर्ड दिइएको छ भने ड्यासबोर्डमा ८ इन्चको फ्लोटिङ इन्फोटेन्टमेन्ट डिस्प्ले ,रिभाइज क्यामेरा, पुस स्टार्टरस्टप बटम, कि लेस इन्ट्री जस्ता विशेषता पाउन सकिन्छ। कम्पनीले यसको मूल्य ५७ लाख ५० हजार निर्धारण गरेको छ।
रेनोको नेपालको लागि आधिकारिक वितरक एड्भान्स अटोमोवाइलले यही हप्ता क्विड बिएस६ सार्वजनिक गर्न लागेको छ। क्विड बिएस६ २ ओटा अप्सनमा ल्याइने कम्पनीका महाप्रवन्धक अभिर श्रेष्ठले जानकारी दिए। १.० पेट्रोल इन्जिनको क्विड बिएस६ ले ६७ बिएचपी पावर र ९१ एनएक टर्क जेनेरेट गर्छ।
५ सिट क्षमताको यो गाडीमा २७९ लिटरको बुट स्पेस छ।
यसमा पावर स्टेरिङ, पावर विन्डो, एबिएस, एयर ब्याग, एयर कन्डिस्नर लगायतका फिचर्स छन्। यसको आरएक्सटी (ओ) अप्सनको २४ लाख ९९ हजार र यसको आरएक्सटी (ओ) अटोमेटिकको २६ लाख ४९ हजार निर्धारण गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
आइकनिक अमेरिकन अटो ब्रान्ड जिपको र्यांग्लर र ग्रान्ड चेरोकी पनि दशैं अघि सार्वजनिक हुने भएको छ। नेपालका लागि जिपको आधिकारिक वितरक लाइफ अटोमोबाइलले र्यांग्लरको रुबिकन र सहारा ट्रिम सार्वजनिक गर्न लागेको हो। र्यांगलर अनलिमिटेडमा २.० लिटरको टर्बो ८ स्पिड अटोम्याटिक इन्जिन रहनेछ।
जसले अधिकतम २०१ किलोवाट पावर र ४०० एनएम टर्क उत्पन्न गर्नेछ। ८१ लिटर फ्युल ट्यांक क्षमता भएको यो अफरोडरमा सुरक्षाका सप्लिमेन्टरी फ्रन्ट सिट साइड एअर ब्याग, थ्रि रियर सिट हेड रिस्ट्रेन, टायर प्रेसर मनिटरिंग डिस्प्ले, चाइल सिट अपर टेथर एन्करेज आदी फिचर छन्।
त्यसैगरी, यसमा डीआरएल, फ्रन्ट फग एलईडी ल्याम्प, एईडी रिफ्लेक्टर हेडल्याम्प, अटोम्याटिक हेडल्याम्प लेभलिंग सिस्टम, एडाप्टिभ रियर ब्रेक लाइट जस्ता लाइटिंग सिस्टम छन् । त्यसैगरी प्रिमियम ब्ल्याक सनराइडर सफ्ट टप, फ्रिडम प्यानल स्टोरेज ब्याग, रियर विन्डो डिफ्रस्टर, हार्ड टप लगायत छन्।
कम्पनीले रुबिकनको मूल्य २ करोड ५७ लाख ९० हजार र सहारा ट्रिमको २ करोड ३९ लाख ९० हजार निर्धारण गरेको छ।
त्यस्तै, लक्जरी एसयुभी सेग्मेन्टमा राखिने ग्रान्ड चेरोकी मिड–साइज एसयुभी हो जुन सधैं ‘युनिबडी च्यासिस’मा बनाइएको हुन्छ। सामान्यतया एसयुभी निर्माताहरुले आफ्ना एसयुभीलाई बडी–अन–फ्रेम मा निर्माण गरेका हुन्छन्। यसमा ३.० भी६ ८ स्पिड अटोम्याटिक इन्जिन रहनेछ जसले १७२ किलोवाट पावर र २८५ एनएम टर्क उत्पन्न गर्छ।
यसमा रेन सेन्सिंग वाइपर, हेडल्याम्प वासर, रियर विन्डो वाइपर, रिमोट किलेस इन्ट्रि, इन्टिग्रटेड भ्वाई कमान्ड, जस्ता सुविधा हुनेछन्। कम्पनीले यसको मूल्य २ करोड ५९ लाख ९० हजार निर्धारण गरेको छ।
जापानी मोटर कम्पनी टोयोटाको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्राली दशैंलाई मध्यनजर गर्दै कोरोला क्रस सार्वजनिक गर्न लागेको छ। कम्पनीले यसको २ ओटा अप्सन भित्राउन लागेको हो।
१७९८ पेट्रोल इन्जिनको कोरोला क्रसले १३८ एचपी पावर र १७२ एनएम टर्क जेनेरेछ गर्छ। ५ सिट क्षमताको यो गाडीको फुल फ्युल क्षमता ४७ लिटर छ। त्यस्तै यसको ग्राउण्ड क्लेयरेनस १६१ मिलिमिटर छ। यसमा एयर कन्डिसनर, पावर विन्डो, अटोम्याटिक क्लाइमेट कन्ट्रोल, हिटर, पावर स्टेरिङ लगायतका फिचर्स छन्।
स्कोडाको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लुले दशैंअघि र्यापिड टीएसआईको अटोमेटिक भेरियन्ट पनि सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
नयाँ र्यापिड टिएसआई अटोमेटिकमा बीएस६ कम्प्लाइन्ट ३ सिलिन्डर १.० लिटरको टिएसआई ६ स्पिड अटोमेटिक पेट्रोल इन्जिन रहनेछ, जसले अधिकतम ८१ किलोवाट पावर र १७५ एनएम टर्क उत्पन्न गर्नेछ। यो सेडानले १६.२४ किलोमिटर प्रति लिटर बराबरको माइलेज दिने कम्पनीको दावी छ।
नयाँ र्यापिड राइडर प्लस, एम्बिसन, ओनिक्स, स्टाइल र मोन्टे कार्लो गरी पाँच भेरियन्ट र ६ कलरमा उपलब्ध हुनेछ।
यसमा एलईडी डिआरएलसहितको प्रोजेक्टर हेडल्याम्प, फ्रन्ट र रियर फग ल्याम्प, रियर डिफ्युजर, बडी कलर्ड स्वाइलर, इन्फ्रारेड कट भएको फ्रन्ट र रियर डार्क ग्रिन ग्लास, १६ एन्चको क्लबर एलोई ह्विल, ८ इन्च स्कोडा टचस्क्रिन इन्फोटेन्मेन्ट, रियरभ्यु क्यामेरा र चार वटा एअरब्याग रहनेछन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ३०, २०७७, ०९:००:००
स्कुटर-मोटरसाइकलको कर बढ्यो, बागमति प्रदेशकाले अब कति तिर्नुपर्छ?
२० वर्षे पुराना सवारी रोक लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन
‌‌ओलाको विद्युतीय स्कुटर अगस्टमा सार्वजनिक हुने, के–के छन् विशेषता?
रेनोको ‘राइड विथ काइगर’ सम्पन्न
भेस्पा र अप्रिलिया स्कुटरको मूल्य बढ्ने, साउन मसान्तसम्म पाइन्छ यो मूल्यमा
फोर्डको नयाँ फिगो सार्वजनिक, यस्तो छ विशेषता र मूल्य